October 18, 2020 700
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) नोकरीमा समय खर्चिनेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ भने कार्यक्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिने हुँदा तपाईलाई विश्वास गरी थप कार्यभार सुम्पनेछन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने नया प्रकृतिको कामगरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि स:मयले साथ दिनेछ । इमान्दारीता तथा लगानशिलताले पक्ष पहिल्याउ सहज हुनेछ । महंंगा तथ विलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर तान्न सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) विवाद तथा प्रति’स्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । पुराना समस्या तथा रोगहरु स्वत हल भएर जानेछन् । आर्थिक अ:वस्था सुदृढ बनाउने चा:लिने कदमहरु स्वत स्फुर्त रुपमा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्नेछ । पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता हात लाग्ने योग रहेकोछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिने तथा जीवन सा:थीसँग रमाइलो यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) खान:पानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य कमजोर ब:न्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउला। नयाँ योजना कार्यान्वय:नमा ल्याउन नसकिए पनि लगनशी:लताले विस्तारै प्रगति हुनेछ। बौद्धिक कार्यबाट थोरै भए पनि लाभ हुनेछ। व्यवसायिक काम बीचमा अवरुद्ध बन्न सक्छ। सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) तपाईँको व्यावहा:रले मान्यजन तथा आमाको मन दुख्नेछ ध्यान दिनुहोला । अरुकै काममा समय बित्ने हुदा आफ्नो काम थाति रहनेछ । बिभिन्न योज:नाहरु छलफलका लागि ल्याउन सकिने भएपनि सहकर्मि:हरुबाट नै बिरोध हुनेछ । अध्ययनमा भनेजस्तो सफल:ता हात लगाउन निकै मेहनतको जरुरी पर्नेछ । कुनै काम गर्दा गम्भिर हुनुहोला हतार गर्नाले काम बिग्र:नेछ । प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग रहेकोछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) छोटो तथा रमाइलो यात्राको तय हुनेछ भने यात्राका क्रममा रमाइला तथा मन मिल्ने साथीभाइहरु भेटिनेछन् । प्रणय सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने एक अर्काको सह:योगले खोजमुलक विषयमा मन जानेछ । आम्दा:नी बढाउन गरिने कामहरु समयमा नै सम्पन्न गरि आर्थिक स्थिति मजभुत पार्न सकिनेछ । दाजुभाइको सहयोगले राम्रा तथा परिणा:म मुखि कामगर्न सकिनेछ । विवादित विष:यहरु तपाईँकै पक्षमा आउने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) सम’य तथा परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता अलि दुःख पाइनेछ । पहिलेका निर्णयले काममा चुनौती आउने देखिन्छ। अरूको व्यवहार:ले शंका उब्जाए पनि मान्य:जनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा लाभ मि:ल्नेछ। महत्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न केही समय पर्खनुहोला। कुटुम्ब तथा आफन्त सँग मनमु:टाब बढ्ने तथा बिवाद सिर्जना हुनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) पुराना कामबाट लाभ लिने समय रहेकोछ भने नया काम शुरु गर्दा मनग्गे आम्दा’नी हुनेछ । समयको सहि सदुपयोग गरि रचानात्मक काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ । साथीभाइको सहयात्रा तथा सहका’र्यबाट राम्रा काम गर्न सकिनेछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुका लागि सम:यले साथ दिनेछ भने नया नया प्रेम प्रस्ताब आउनेछ । विद्यार्थी’हरुले पढाइमा राम्रो प्रगति गरि आफन्त तथा गुरुवर्गहरुलाई खुसि राख्न सक्नेछन् ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) लामो दुरिको यात्रा हुनेछ भने यात्राका क्रममा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहे:कोछ । काम गर्दा निति नियम:को पालना नगर्दा दण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा कम:मात्र आम्दानी हुदा आर्थिक क्षेत्र कम:जोर रहनेछ भने विदेशी सामानको व्यापार भने फस्टाएर जानेछ । भौतिक सम्पति तथा द्रब्य हराउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । प्रे:ममा अविश्वास गर्नाले टाढीनु पर्ने हुन सक्छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने दैनिक कारोबार बढ्ने योग रहेकोछ । बिशिष्ट व्यात्तिहरु:को भेटघाटले व्यवसायमा लगा:नी बढाउन सहयोग पुग्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँलाई सबैले मान्नेछन् भने नेतृत्व लिनु पर्ने अवस्था आउनेछ । जनताको कामहरु समयमा गर्न सकिने हुनाले इज्ज:त प्रतिष्ठा बढेर जानेछ । प्रेममा उच्च सफ:लता प्राप्त हुनेछ भने लामो समय देखिको प्रेमला’ई विवाहमा परिणत गर्ने सहमति आफन्तबाट प्राप्त हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) नोकरी तथा जागिरमा आफ्नै कमजोरिले समस्या आउनेछ । कार्यक्षेत्र:मा काम बिग्रने हुँदा आलोच’ना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । व्यापार व्यवसाय खस्केर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था बिग्रनेछ । राज:नीति तथा समाजसेवामा जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा इज्जत प्रतिष्ठामा कमि हुनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिससँग विवाद हुनेछ भने सरकारी सेवामा रहेर का:म गर्नेहरुले विशेष ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) काम बिग्रने तथा मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यव:सायमा मन्दि आउनेछ । पढाई लेखा:ई तपाई आफ्नै कारणले बिग्रनेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर चासो रहेपनि गलत व्यक्ति:हरूले प्रयोग गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला । यात्रा गर्दा बिशेष ख्याल गर्नुहोला सम:स्या आउन सक्छ । शैक्षिक यात्रा भने फलदायि रहनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) पढाइ लेखाइमा उपलब्धि हात पार्नको लागि कडा मेहनत’को खाचो पर्नेछ । व्पाया’र व्यवसायमा समय दिन नसक्दा आम्दानीमा घटो:त्तरि हुनेछ । आफन्त तथा दिदी बहिनीसँग सामान्य कुरामा पनि मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ । स्थाई सम्पति तथा सवारि साधन:को प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यय’म रहेकोछ । प्रेममा नचाहाँदै नचाहादै टाढिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
Prevभोलि कार्तिक २ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
Nextआज सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्…
विदेशमा बस्दै आएकी एक नेपाली महिलाद्वारा आफ्नै तीन छोरा-छोरीको गरिन् ह’त्या !
टिक-टककाे लागी स्वरुपनै फेरिन् निरुपाले (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
दाजुभाई मृ’त्यु- घट’नास्थलमा भेटिए ३ कट्टु, दाजुको १ महिना अघिमात्र भएको थियो बिहे (भिडियोसहित)